I-Lucidchart: Ukusebenzisana kunye nokuJonga ii-Wireframes zakho, iitshathi zeGantt, iiNkqubo zeNtengiso, ii-Automations zokuThengisa, kunye nohambo lwabaThengi | Martech Zone
I-Lucidchart: Sebenzisana kunye nokuJonga iifreyimu zakho zocingo, iitshathi zeGantt, Iinkqubo zentengiso, ii-Automation zeNtengiso, kunye nohambo lwabathengi.
NgoLwesihlanu, Meyi 6, 2022 NgoLwesihlanu, Meyi 6, 2022 Douglas Karr
Umbono uyimfuneko xa kuziwa ekuchazeni inkqubo entsonkothileyo. Nokuba yiprojekthi enetshati yeGantt ukunika isishwankathelo senqanaba ngalinye lokusasazwa kwetekhnoloji, ii-automation zentengiso ezithontsiza unxibelelwano olulolwakho kumntu onethemba okanye umthengi, inkqubo yokuthengisa ukujonga unxibelelwano olusemgangathweni kwinkqubo yokuthengisa, okanye nomzobo nje ukuya. jonga iihambo zabathengi bakho… ukukwazi ukubona, ukwabelana, kunye nokusebenzisana kwinkqubo linyathelo elibalulekileyo kwingcinga kunye nenkqubo yokuphunyezwa.
Kangangeminyaka, oku bekusenziwa ngesoftware yedesktop eyomeleleyo njengeVisio, okanye yenziwe ngokulula kwisixhobo sokubonisa esinje ngePowerPoint. Nangona kunjalo, isoftware yedesktop ayiboneleli ngeendlela zamaqela akude, izixhobo kunye nabathengi. Ngena Lucidchart, isicelo somzobo esisekelwe kwifu esizisa amaqela ndawonye ukwenza izigqibo ezingcono kunye nokwakha ikamva.
Lucidchart Indawo yokusebenzela ebonakalayo
I-Lucidchart yindawo yokusebenza ebonakalayo edibanisa umzobo, ukubonwa kwedatha, kunye nentsebenziswano ukukhawulezisa ukuqonda kunye nokuqhuba izinto ezintsha. Ngesi sisombululo, sisekwe kwilifu, nabani na unokufunda ukusebenza ngokubonakalayo kunye nokusebenzisana ngexesha lokwenyani ngelixa esakha iitshati eziqukuqelayo, iimockups, imizobo ye-UML, kunye nokunye.
kunye Lucidchart, abantu ngabanye kunye namaqela ngokulula imephu imizobo ngeetemplates inkqubo eqhelekileyo. Izibonelelo zeqonga ziquka:
Yenza umbono ekwabelwana ngawo -Khawuleza ubone iinkqubo zeqela lakho, iinkqubo, kunye nolwakhiwo lombutho. Umzobo obukrelekrele ikuvumela ukuba ube nomfanekiso-ngqondweni wezimvo ezintsonkothileyo ngokukhawuleza, ngokucacileyo nangentsebenziswano ngakumbi.
Fumana wonke umntu kwiphepha elifanayo – Ulwimi oluqhelekileyo olubonakalayo lukhawulezisa intsebenziswano kwaye luphucule unxibelelwano. Isixhobo siza kunye noguqulelo, izimvo ezijongene nemilo ethile, incoko yomhleli, ubhalo-xesha lokwenyani, izikhombisi ezisebenzisanayo, kunye nezaziso.
Ziphilise izicwangciso - Lucidchart ikuvumela ukuba uhlale ugxininise kwaye ubaleke phambili ngenjongo. Yenza izicwangciso eziya kuqhuba ishishini lakho ebomini.
Iqonga yindawo yokugcina amaxwebhu alungele ishishini adibanisa ne Indawo yokusebenzela kaGoogle, Microsoft, Atlassian, Slack, kunye nokunye.
Isicelo somelele kangangokuba ndiza kusisebenzisa kwi-wireframing ngokunjalo. Bakwanikezela ngokukwazi ukongeza iitshathi zombutho, ii-mockups ze-iPhone, imizobo ye-UML, imizobo yenethiwekhi, iimephu zengqondo, iimephu zesayithi, imizobo yeVenn, kunye nokunye.
I-Lucidchart isinceda sisombulule ngokubonakalayo iingxaki ezintsonkothileyo ngokudala imizobo yezakhiwo kunye neeflowu zetshathi ezidala ukucaca kunye nokunceda iqela lethu elisasazwayo liphakame ngokukhawuleza kwi-codebase kunye neenkqubo. … Ivumela amalungu eqela amaninzi ukusebenzisana ngaxeshanye, ikwenza kube lula ukusebenza kwiqela elisasazwe ngokupheleleyo.
Ukuqalisa kulula kwaye kukho itoni yezixhobo kwijelo labo likaYouTube ukuba ungathanda ukuqalisa ngokusebenzisa iqonga. Iqonga likwaneselula kunye neetafile zokusebenza kwi-iOS kunye ne-Android.
Ukubhengezwa: Ndililungu le Itshathi yeLucid kwaye ndisebenzisa eli khonkco kweli nqaku kunye namanye amakhonkco adibeneyo.
tags: Intsebenziswanouhambo lwabathengiimizobo yokuhambaiiflowutsitshathi ye-ganttitshatiiinkqubo zemephuukuzenzekela ngokuzenzekelayoiimockupsinkqubo yokuhambainkqubo yokwenza imephuinkqubo yokuthengisaintsebenziswano yeqelaImizobo ye-UMLindawo yokusebenza ebonakalayoimbonakalo yendawo yokusebenzaiifayile zefowuni
Uwugcina njani umhla welungelo lakho lokushicilela uhlaziywa ngokweNkqubo kwiWebhusayithi yakho okanye kwiVenkile ye-Intanethi
Imizekeliso emi-6 yeZixhobo zokuThengisa eziSebenzisa ubuNgcali boBuchule (AI)